'Izitali'-Igumbi elinye lokulala Studio Apartment
Isitudiyo sokulala esinye esikwindawo entle eyi-100 yeehektare nje eyi-15km ukusuka kumbindi weTamworth. Le yunithi izimele inekhitshi layo, igumbi lokuhlambela, indawo yokuhlamba impahla kunye nepatio ejonge iinduli kunye nezibane zaseTamworth.
Ukuba yimizuzu eyi-7 kuphela ukusuka kwi-ALEC nayo ifumaneka kwi-stables efihliweyo, ephethe iipeni kunye neeyadi ezijikelezayo ukuba ungathanda ukuzisa ihashe lakho ngentlawulo eyongezelelweyo ye-$ 20 / ubusuku.
Kukwakho nenkundla yentenetya kunye neNetflix efumaneka simahla.
Isitudiyo esihle esinegumbi elinye lokulala esijonge iinduli kunye nedolophu yaseTamworth. Indawo entle yokuphumla kunye nokubaleka kodwa isondele ngokwaneleyo kuyo yonke into enokwenziwa nguTamworth!
4.98 ·Izimvo eziyi-84
4.98 · Izimvo eziyi-84
ITamworth yidolophu enkulu yelizwe enayo yonke into oyifunayo! Eyaziwayo ngomthendeleko womculo welizwe, oku kuya kuba yindawo efanelekileyo yokuhlala kunye namava onke anokunikelwa ngumthendeleko.
Siza kusebenzisana neendwendwe ukuze uzinze kwaye sikukhokelele kwindawo kwaye utshintshisene nezitshixo ekuqaleni nasekupheleni kokuhlala kwakho. Siyakuqhagamshelwa ngomnxeba ngawo onke amanye amaxesha.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-18594-2